Gịnị Mere O Ji Dị́ Mma Ịna-akwụwa Aka Ọtọ? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ihe mere ọtụtụ ndị anaghị akwụwa aka ọtọ
Uru ịkwụwa aka ọtọ bara
N’ụwa taa, o nwere ike ịdị ka ịkwụwa aka ọtọ na-eme ka ihe ghara ịgara mmadụ nke ọma. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ ndị nwere ike ịna-eche, sị:
‘Ọ bụrụ na m gwa ndị mụrụ m eziokwu, ha agaghịzi na-ekwe m mee ihe ụfọdụ m na-enwe mmasị ime.’
‘Ọ bụrụ na mụ aghọghị aghụghọ n’ule a, m nwere ike ịda.’
‘Ọ bụrụ na mụ ezughị ihe a, m ga-agbalịwa idokọta ego m ga-eji azụ ya.’
Ụfọdụ ndị nwere ike ịna-eche sị, ‘Ò nwekwaranụ oké ihe ọ bụ? Ọ̀ bụ na mmadụ niile adịghị aghọ aghụghọ?’
Azịza ajụjụ ahụ bụ mba. Ọtụtụ ndị, ma ndị na-eto eto, kweere na ịkwụwa aka ọtọ bara uru. E nwekwara ezigbo ihe mere ha ji kweta. Baịbụl kwuru, sị: “Mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, ọ bụ ya ka ọ ga-aghọrọkwa.” (Ndị Galeshia 6:7) Ihe ọ pụtara bụ na e nwere ihe ga-esirịrị n’ihe ọ bụla anyị mere pụta, o nwere ike ịbụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ.
Dị ka ihe atụ, tụlee ihe ọjọọ ịgha ụgha kpataara ụfọdụ ndị.
“E nwere mgbe ghaara mama m ụgha gbasara otu nwa okorobịa mụ na ya na-akparịta n’ekwentị. Mama m ma na ihe m gwara ya abụghị eziokwu. Mgbe m ghara ụgha ahụ ugboro atọ, ezigbo iwe were ya, ya amachie m ime ihe ndị na-amasị m ruo izu abụọ. O machiri m ile tiivi, jichiekwa fon m otu ọnwa. Ihe a mere ka m kwụsị ịghara ndị mụrụ m ụgha.”—Anita.
Ihe ị ga-echebara echiche: Gịnị mere ọ ga-eji wee oge tupu mama Anita amalitekwa ịtụkwasị ya obi?
Baịbụl sịrị: “Ebe unu hapụworo okwu ụgha, ka onye ọ bụla n’ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu.”—Ndị Efesọs 4:25.
“M ghaara ndị mụrụ m ụgha, chee na nke ahụ agaala. Mgbe e mechara, ha gwara m kwughachi ihe ahụ m kwuru merenụ. Ihe m kwuziri dị iche n’ihe m kwuburu n’ihi na m ghaara ha ụgha chara acha, e nweghịzi m ike icheta otú m si kọbuoro ha akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu, ụdị ihe a agaghị eme gị.”—Anthony.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee ihe Anthony gaara eme ka ọ ghara imechu onwe ya ihu?
Baịbụl sịrị: “Egbugbere ọnụ ụgha bụ ihe arụ n’anya Jehova, ma ndị na-eme ihe n’ikwesị ntụkwasị obi na-eme ka o nwee obi ụtọ.”—Ilu 12:22.
“E nwere otu enyi m na-etinyekarị okwu nnu na ose. Ahụrụ m ya n’anya, na-agbakwa mbọ ka m ghara ịna-atụcha ihe ọ bụla o kwuru. Ma, ọ na-ara m ahụ́ ikweta ihe o kwuru ma ọ bụ ịtụkwasị ya obi.”—Yvonne.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú itinye okwu nnu na ose na ịgha “obere” ụgha nwere ike isi mebie aha enyi Yvonne?
Baịbụl sịrị: “Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile.”—Ndị Hibru 13:18.
Ọ bụrụ na ntọala ụlọ agbawaa, o nwere ike ime ka ụlọ ahụ daa, otú ahụ ka akwụwaghị aka ọtọ nwere ike imebi aha ọma i nwere
Ugbu a, tụlee ihe ọma nwere ike imere gị ma ị na-akwụwa aka ọtọ.
“E nwere mgbe ego nwaanyị nọ na-aga m n’ihu dapụrụ. Mụ akpọọ ya, nye ya ego ahụ. Obi tọrọ ya ezigbo ụtọ, ya ekelee m. Ọ sịrị m: ‘Ị bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụghị mmadụ niile ga-emeli ihe a i mere.’ Obi dị m ụtọ na mmadụ hụrụ ihe ọma m mere.”—Vivian.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee ihe ọ ga-abụ ya mere o ji ju nwaanyị ahụ anya na Vivian na-akwụwa aka ọtọ? Olee otú ịkwụwa aka ọtọ si baara Vivian uru?
Baịbụl sịrị: “Obi ụtọ na-adịrị ndị . . . na-eme ezi omume mgbe niile.”—Abụ Ọma 106:3.
“Ọrụ ndị ezinụlọ anyị bụ ihichara ndị mmadụ ụlọ. Mgbe ụfọdụ, anyị hichawa ọfis ndị mmadụ, anyị na-ahụ mkpụrụ ego tọgbọ n’ala. Mgbe ọ bụla anyị hụrụ ya, anyị atụtụrụ ya dowe n’elu tebụl dị́ nso. Ọ fọdịrị obere ka iwe wee otu onye na-arụ ọrụ n’ebe ahụ n’ihi otú anyị si akwụwa aka ọtọ. Ọ sịrị anyị: ‘Ego a enwekwanụghị ihe ọ bụ.’ Ma, ihe a mere ka ọ na-atụkwasị anyị obi.”—Julia.
Ihe ị ga-echebara echiche: Ebe ọ bụ na e ji ịkwụwa aka ọtọ mara Julia, olee otú o nwere ike isi nyere ya aka mgbe ọ bụla ọ ga-achọ onye ga-ebinyere ya aka n’akwụkwọ ma ọ chọwa ọrụ ọzọ?
Baịbụl sịrị: “Gbalịsie ike ka i chee onwe gị n’ihu Chineke dị ka onye ihe ya dị ya mma, onye ọrụ nke na-enweghị ihe ọ ga-emere ihere.”—2 Timoti 2:15.
“N’ebe m na-arụ ọrụ, m ji iri awa isii na anọ rụọ ọrụ. Ma, a kwụrụ m ụgwọ onye rụrụ ọrụ iri awa asatọ. Ọ bụ eziokwu na ọ gaara adị mma ma m were ego ahụ, ma agaghị m emeli ya. M gwara ya onye na-akwụ anyị ụgwọ, obi atọọ ya ezigbo ụtọ. Ihe na-aga nke ọma n’ụlọ ọrụ ahụ. Ma, a sị na m weere ego ahụ, ọ gaara abụ ohi ka m zuru.”—Bethany.
Ihe ị ga-echebara echiche: È nwere ihe dị́ iche n’izu ego ụlọ ọrụ na izu mmadụ ohi?
Baịbụl sịrị: “Onye aghụghọ bụ ihe arụ n’anya Jehova, ma ya na ndị na-eme ihe n’eziokwu na-enwe mmekọrịta chiri anya.”—Ilu 3:32.
Ụdị mbọ ndị mmadụ na-agba iji ghọọ aghụghọ n’ule anaghị abụ obere ihe. Ọ bụrụ na ha na-agba mbọ otú ahụ gụọ akwụkwọ ha, ha agaghị na-ada n’ule.
M na-ajụ onwe m, sị: ‘Olee nsogbu kachanụ m ga-aba na ya ma m kwuo eziokwu?’ Mụ ejirizie ya tụnyere nsogbu m ga-aba na ya ma m ghaa ụgha. Iche ihe ndị nwere ike isi n’omume m pụta na-eme ka m na-akwụwa aka ọtọ.
Ọtụtụ ndị na-agha ụgha ma ha chee na ikwu eziokwu ga-eme ka ha taa ahụhụ. Ma, ọ kacha mma ikwu eziokwu, a taa gị ahụhụ karịa ịgha ụgha, akọnuche gị ana-apịa gị ụtarị.
Ị̀ Na-akwụwa Aka Ọtọ?
Mụta ihe ị ga-eme ka ihe ghara ịka njọ.
Onye ọ bụla na-emejọ ihe, ma ọ bụghị onye ọ bụla na-esi n’ihe o mejọrọ mụta ihe.
Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru?—Ịkwụwa Aka Ọtọ